Eeyga Waalan Ee Maraykanka Ka Taliya Mudawakh Trump Oo Af Qadhmuunidiisii Cirka Gaadhay, Cayna Bilaabay – Heemaal News Network
Madaxweynaha dalka Maraykanka Trump ayaa afqadhmuuni aan loo aabo yeelin kula dhacay dalalka qaarada Afrika, Haiti iyo dalka Salvador.
Trump oo kulan la lahaa xubnaha golaha wakiiladda ee dalkiisa, oo looga hadlaayey xeer socdaal oo la meel mariyey, ayaa si waali ku jirto markaliya canaan kula dul dhacay xildhibaandii. “Maxaa loogu ogolaanayaa in ay halkan yimidaan dad ka yimid waddamo xumi” ayuu yidhi Trump sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku sugnaa kulankan.
Waa maxay sobobta aan dad uga soo qaadayno Haiti, Salvador iyo Afrika, waa in aan ka soo qaadanaa sida dalka Norwey.
Qaar ka tirsan xildhibaanada labada xisbi ee Maraykanka ayaa hadalka Trump aad u naqdiyey iyaga oo sheegay in hadda wixii ka danbeeya 100% lagu sheegi karo in uu yahay cunsuri.
Xildhibaan ka soo jeeda Dimuquraadiga Dick Durbin iyo Lindsay Graham oo ah xildhiibaan Jamhuuriya oo labbaduba ay u kala hadlayeen xisbiyadooda, ayaa u sheegay CNN-ta in hadalada madaxweynuhu ay yihiin kuwo aad u qalafsan.
Hadala madaxweynuhu waa kuwo aan caqli-gal ahayn, kala-qaybsanaana keenay, waana fikarado ka soo horjeeda qiyamka dalkeenna. qof leh dabeecadda noocan oo kale ah lama aqbali karo in uu hoggaamiyo dalka, ayuu yidhi wakiilka Jamhuuriga Mia Love, oo waalidkiisu ka soo jeedaan Haiti.
Waxaa iyaguna warbaahinta la hadal xildhibaanada Richard Blumenthal iyo Luis Gutiérrez oo labbaduba ku tilmaamay in aan loo dul qaadan karin hadalada wajaquhu ku jiro ee uu ku hadlaayo mudawakh Trump iyaga oo ku sheegay in uu yahay Cunsiri caqli gaab ah.
Maraykanka Oo Iiraan ku Eedeeyay Inay Xuutiyiinta Siisayeen Gantaalladii Lagu Weeraray Sacuudiga.
Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa soo bandhigtay wax ay sheegtay in ay yihiin haraaga gantaallo ay dowladda Iiraan siisay mucaaradka Yaman. Gantaaladan ayay Xuutiyiinta u isticmaaleen weerar ay ku qadeen […]
Mareykanka iyo IGAD Oo ka Wada Hadlay Xaalada Soomaaliya.
October 24, 2017 Caalamka
Dowladda Mareykanka ayaa ammaanka Soomaaliya ayaa kala hadashay Urur goboleedka IGAD kaddib shir ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Mareykanka waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in si weyn loo taageero dowladda […]